အယ်ဒီတာလို့ခေါ်တဲ့ ငပေါများသို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » အယ်ဒီတာလို့ခေါ်တဲ့ ငပေါများသို့ 
အယ်ဒီတာလို့ခေါ်တဲ့ ငပေါများသို့ 
Posted by phone_kyaw on Oct 13, 2012 in Opinions & Discussion | 17 comments
အစိုးရကို ကြောက်စရာမလိုသလို အထင်ကြီးစရာလည်း မလိုဘူး။ အစိုးရဆိုတာလူတစ်စုပါ။ အဲဒိလူတစ်စုကို ပြည်သူတွေက ပိုက်ဆံပေးပြီး လခစားအဖြစ်နဲ့ ငှားထားတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ အလုပ်က ပြည်သူလူထုတွေ အေးချမ်းစွာ ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် စီမံခန့် ခွဲပေးရတယ်။ ဒါက သူတို့ အလုပ်ပဲ။ အဲဒါကို သဘောမပေါက်ပဲ ဝန်ကြီးတို့ ဝန်လေးတို့ တို့ဖင်တုန်အောင်ကြောက်ပြီး ဖားနေတာကို မြင်ရတာ ရွံစရာကောင်းတယ်။ အဲဒိလိုလုပ်လေ အစိုးရဆိုတဲ့ လူတစ်စုက ထင်တိုင်းကြဲလေပဲ။ ဆိုတော့ ကိုယ့်အထာနဲ့ ကိုယ်နေပြီး အစိုးရမှားနေတာကို ထောက်ပြဝေဖန်ဖို့ လိုတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကစလို့ အောက်ခြေဝန်ထမ်းအထိ အားလုံးသော အစိုးရဝန်ထမ်းတိုင်းကို ပြည်သူရဲ့ အခွန်ငွေနဲ့ လစာပေးပြီး ခိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို မသေမချင်း မှတ်ထားဖို့ လိုတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ဘယ်တော့မှ အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်ဝန်ကြီးတွေကို မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေ ဆက်ဆံသလို မဆက်ဆံဘူး။ ခက်တာက ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က မသိတာလား ဒါမှမဟုတ် အရိုးစွဲနေတာလား မသိဘူး။ အခုအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အခြေအနေကိုပေးနေပြီ။ ရဲရဲတင်းတင်းပြောကြဖို့ လိုနေပြီ။
နောက်တစ်ခုက ဘယ်သူတွေဘာပဲရေးရေး ဆင်ဆာဖြတ်တာ ဘလောဂ့်တာ မလုပ်ဖို့ လိုတယ်။ ဖတ်တဲ့သူက သူ့ ဟာသူ ရွေးပြီး ဖတ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်ကြုံတွေ့ ရတာက အယ်ဒီတာဆိုတဲ့စောက်ပေါတွေက စာရေးသူရေးတာကို ဘလေ့ာဂ်ရတာနဲ့ပိတ်ရတာနဲ့ ။
ကျုပ်တို့ အချိန်နဲနဲတော့ စောင့်ရလိမ့်အုံးမယ်ထင်တယ်…ဗြုံးစားကြီး
တော့လည်းမလွယ်ဘူးဗျ…နှစ်ပေါင်းများစွာ စွဲခဲ့တဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီးဆိုတော့
ဦးဆောင်မယ့်သူ မရှိ့လို့ပါ…မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး..ခု့လို ကျနော် အပါအဝင် နားမလည်ကြတဲ့ ငပိန်း..ပြည်သူလူထု့တွေ ကို ဟောပြောပြသပေးပါ့လားဗျ..နောက်ကလိုက်ပါ့မယ်..စင်ပေါ်တက်ရဲရင်ပေါ့…ဘယ်စာစောင် ဘယ်ဂျာနယ် ဘယ်သီတင်းစာမှ့ ထည့်ရေးမနေပါနဲ့…ပြောသလို သောက်ပေါ အယ်ဒီတာတွေနဲ့ တွေ့နေရင် ဆင်ဆာကို အရင်းကနေဖြတ်နေဦးမယ်…မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး..ဟောပြောပါဗျ…စင်..ကိစ္စ..နေရာ ဘာညာ အားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်..အသင့်တက်ဟောယုံလေးပါ…(ကားပြာလေးကို စီးကာရယ်..ကျောင်းကိုသူလာတယ်….)
“အယ်ဒီတာလို့ ခေါ်တဲ့ ငပေါများသို့ ” လို့ ကိုရင်ဘုန်းကျော်ရေးထားတာကို..
“အယ်ဒီတာလို့ခေါ်တဲ့ ငပေါများသို့ ” လို့ စာလုံးပေါင်းပြင်ပေး..။ Category ကိုလည်း Copy/Paste ဖြစ်နေတာကို.. သင့်တော်မယ်ထင်တာ ပြင်ပေးလိုက်ကြောင်း..။ :528:
ဒါပေမဲ့ အခုဒီပို့စ်နဲ့ပေါင်းဖတ်မှ ပြည့်စုံသွားပါတယ်။
(အစိုးရဆိုတာလူတစ်စုပါ။ အဲဒိလူတစ်စုကို ပြည်သူတွေက ပိုက်ဆံပေးပြီး လခစားအဖြစ်နဲ့ ငှားထားတာဖြစ်တယ်။)
အဲဒီစကားလုံးကို ဧပြီလ လောက်က ကိုမင်းကိုနိုင်
ရေနံချောင်းမြို့ မှာ ပြောတာကို ကြားခဲ့မိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော်ဒီစကားစုကို စဉ်းစား
ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါ (မှန်/မှား ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပါ)
– ကျွန်တော်ခြံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ အလုပ်သမားတစ်စုကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ငှားခဲ့ပါတယ်။
– အစိုးရအဖွဲ့အဖြစ် လုပ်ပေးဖို့ ပိုက်ဆံပေးပြီးငှားခဲ့ပါတယ်။
– အစိုးရအဖွဲ့အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ လစာပေးပါတယ်။
တူသလိုလိုနဲ့ မတူညီတဲ့ ၀ါကျသုံးကြောင်းပါ။
ကြုံတုန်းဝင်ပွားဘီ သူဂျီး သူဂျီး ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီ ကျုပ်ကိုဟိုကလီးများရဲ့
မရဝူး တစ်ခြားပို(စ်)တွေကပုံမှန်ပဲ။အခုပို(စ်)နဲ.ဘာမှမဆိုင်ဝူးနော် ကျုပ်အကြောင်း
ခင်ညားတို့က.. ကျုပ်ကို ညမအိပ်ပဲ.. ဒီဝဘ်ဆိုက်မှာ ထိုင်စောင့်နေတယ်ထင်တာလား.
( အခုတော့.. တကယ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်.။ ပို့စ်တင်သူက.. မန်င်ဘာအကောင့်အသစ်ကို.. အဲဒီပို့စ်တင်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့.. တခုဖွင့်ပြီး.. ပို့စ်တခုထဲတင်. ဖွချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်ရှိတယ်လို့.. ယူဆလို့ ဖြစ်ပါကြောင်း.. )
ဟုတ်တယ်လေ ကျနော်တို့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှ သူကြီးက ကျနော်တို့ တစ်နေ့လုံးတင်ထားသမျှကို
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကလူတွေ တင်ထားတာကိုပြောတာနော်
အူယောပ က လူတွေမပါဘူး
အဲဒီ အထဲ သူကြီးမင်းပါ ပါတယ်လို့ ဆိုလိုလိုက်တာလား။
အကြော်စုံပါ ကဘုန်းကျော် ရေ။ ဟိဟိ။
ဟုတ်သားပဲနော် ၊ ရေးတင်ထားတာခွင့်ပြုရင် ၊ မန့်တာကိုလဲ ခွင့်ပြုရမယ်ပေါ့ ၊
လက်မ ပဲမြစ်ကလေး ပြ အဲလေ ထောင်ပြီး ဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျ
အင်း..မီဒီယာလောကတကယ်ပွင့်လင်းလာတယ်လို့ဆိုချင်ရင်…..စည်းစောင့်စည်းမှုဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးကလည်း ကပ်လိုက်လာဘို့ဆိုတာ လိုသေးကြောင်းပါ။
အဟေး …. အရီးလတ်ကလည်း အဲလိုမမေးပါနဲ့ … သွားချီး အဲလေ (ချွေးမလေးရဲ့လမ်းညွှန်)(သဂျီး) က ရှက်သွားမှာပေ့ါလို့ …
ကိုဖုန်းကျော် … အခုခေါင်းစဉ်ကြီးကိုမြင်ပြီး ၀င်မဖတ်ခင် သူကြီးတို့လို အယ်ဒီတာတွေကိုများ တည့်တည့်စောင်းပြောသလားလို့တောင် ထင်တာ ….. ပို့စ်ဖတ်တော့မှ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိဘူး … ဘာလဲ ဟင်းးးးးးးး… ရှင်းရှင်းပြော ဒဲ့ရေးနော် … သများက ဥာဏ်မမှီဝူးရယ် ……
အညာသားတို့ နီပြန်ပါသကော..ကွန့်မန့်လေးတောင်နီပါ့ပဲ…ကဖုန်းကျော်ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာက မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ ထမင်းစားပြီးလူဖြစ်မယ်. ပညာလည်း အထိုက်အလျှောက်တတ်မယ် နှိုင်ငံရေးအသိ့လည်း ရှိ့မယ်.ဆိုတဲ့သူတိုင်း နားလည်ပြီးသား အရာတွေပါ (သတ္တိ့ရှိ့တဲ့သူတွေ စင်ပေါ်မှာ ဟောပြောသွားပြီးခဲ့ပါပြီ) ဒါကို ဒီထဲမှာ လာဟစ်နေလို့ မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး စင်ပေါ် တက်ဟောခိုင်းတာ အညာသားမှားသလားဗျာ…ကိုပေါက် မဖတ်ခိုင်းတဲ့ သူမန့်သွားတဲ့ လင့်ကလည်း ဒီသဘောပါပဲ..အနီပေးသွားတဲ့ သူတွေကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်..(မန်းလေးဂေဇက်မှာ ဝင်ဖတ်..ပို့စ်တွေ တင်နေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပညာတတ်ပါ ခံယူပြီး သမ္မတတစ်ယောက် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရ..ဆိုတာတွေဟာ ပြည်သူ့လစာစား နေတဲ့ဝန်ထမ်း ဆိုတာလေးမှ့ နားမလည်ကြရင်..ကကြီး ခခွေး ပြန်သင်လိုက်ကြပါဦး..ကွန့်မန့်တွေကို နီသွားတဲ့ သူတွေရေ….)ဒီအသိ့ကို သိ့ကြပေ့မယ့် ဘာ့ကြောင့်မပြောရဲကြတယ် ဆိုတာကိုနားလည် ပြီးဖြစ်မှာပါ..
တစ်ခါသော် တစ်ခုသောရွာတစ်ရွာ၏ တစ်နေရာသော လူစည်ကားရာအရပ်တွင်
လူများသည် တစ်ခုသောအကြောင်းတွင် ရယ်မောနေကြလေကုန်၏
လွန်စွာ ကြပ်မပြည့်သော လူတစ်ဦးနှင့် လွန်စွာ စိတ်မမှန်သော လူတစ်ဦးတို့သည်
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ပခုံးခြင်းဖက်ကာ ထိုသော လူစည်ကားရာ အရပ်၏ လမ်းမကြီးအတိုင်း
တစ်ဦးက တစ်ဦးကို နောက်ပြန်လက်ညှိုးထိုး၍
ဒီကောင် အရူးဟူသော အမူရာကို လုပ်ပြနေကြခြင်းဖြစ်လေသတည်း။
အကယ်စင်စစ် ထိုသောအအကြောင်းအရာသည် ပုံပြင်မဟုတ်ခြေ
တစ်ခုသော စိတ္တဇဆေးရုံ၏ နှစ်ယောက်သောလူနာနှစ်ဦးကို
ဆေးရုံအတွင်းရှိ လူနာများမှ တုံ့ပြန်ခြင်းအား
ချစ်စရာကောင်းသော ချစ်စရာ အချစ်တို့၏ဆရာဖြစ်သော ချစ်ဆရာ
ချစ်စ/ဆရာ မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းပင်ဖြစ်လေတော့သည်တကား
…………………… ချစ်စရာကောင်းသော ချစ်စရာ အချစ်တို့၏ဆရာဖြစ်သော ချစ်ဆရာ